Thola ezinye zezinwele ezithopha kunazo zonke zezinwele ezinhle | Bezzia
USusana Garcia | 02/05/2021 20:00 | Ubuhle, Izitayela zezinwele
El izinwele ezinhle ngokuvamile zinezinkinga eziningana futhi enye yazo ukuthi ayinayo ivolumu eningi. Uma lokhu kwenzeka, esikuzamayo ukukwenza kubonakale kukhanya ngokwengeziwe futhi kuchichima, kunokuphila okuningi. Yingakho kunezinwele ezithile nokusikeka okungakusiza ukuthi wakhe leso sitayela ezinweleni zakho ezikwenza ukhohlwe ukuthi zilungile futhi aziziningi kakhulu izinwele. Kukhona ezinye izitayela zezinwele ozothuthukisa ngazo ukubukeka kwezinwele zakho.
I-Las abantu abanezinwele ezinhle kufanele bazinakekele kahle bese ucabanga ukuthi ungayifaka kanjani isitayela ukuze inikeze ukubukeka okunamandla nokunempilo. Ngaphezu kokunakekelwa komkhiqizo, kuyiqiniso ukuthi ukubukeka futhi kuncike ekutheni sizilungisa kanjani izinwele zethu, ngoba singakwazi ukukhiqiza isitayela esihluke ngokuphelele.
1 Ifaniswe ne-midi mane
2 Dare nge-pixie
3 I-tousled-effect braid
4 Bob ngamagagasi
5 Ukunakekelwa kwezinwele okuhle
Ifaniswe ne-midi mane
Ngisho nezinwele zingakusiza ukuthi udale umane obukeka kangcono uma izinwele zakho zilungile. Lokhu kungenye yezinketho ezivame kakhulu, ngoba uma izinwele zigundwe ngokulinganayo, uzoba nomuzwa wokuthi ziningi kakhulu uma uzisika ngezingqimba, ngoba lezi zinciphisa ivolumu. I- Izinwele zeMidi zigqokwe kakhulu futhi ziwuhlobo lwezinwele engalungiswa kalula. Kusinika ukuguquguquka okukhulu ngoba singasebenzisa izesekeli zezinwele futhi senze izitayela zezinwele noma sizigqoke zikhululekile. Futhi kungenye yezinwele zezimfashini zomzuzwana, ngakho-ke akufanele uyeke ukuwugqoka. Ungayinika ivolumu ethile noma amagagasi futhi lokhu kuzodala ukubukeka okuhle kakhulu, kufihle izinwele ezinhle.
Izinwele ezisikiwe zePixie nazo ziyisinqumo esihle. I-pixie ukuthi izinwele ezimfushane ngokweqile kodwa kubukeka kukuhle cishe kuwo wonke umuntu, ngazo zonke izinhlobo zezinwele. Ukusikwa kwe-pixie kulula kakhulu ukukunakekela futhi kusisiza ukuthi sibukeke njenganamuhla futhi siqhekeke ngokwengeziwe, yize kunesibindi impela futhi akuwona wonke umuntu othanda ukugqoka izinwele zakhe zifushane kangaka. Kuphelele uma unezinwele eziqondile ngoba ngeke zigobe.
Enye yezinwele esingazenza uma sinezinwele ezinde futhi ezinde ukudala enye yalezo zitayela ezinokuthinta okuthile okungcolile ngoba kuzinika ivolumu. Kulokhu sikhuluma ngokuluka. Uma sizenza zikame kakhulu, izinwele ezinhle ziyabonakala, kepha uma simosha kancane umphumela uzohluka. Kulula kakhulu ukubona ukuthi izinwele zinevolumu enjani uma uluka luphethwe kancane, ngakho-ke kungumphumela ozuzisa lolu hlobo lwezinwele.
El izinwele ezinhle kufanele zivame ukufakwa kumagagasi, ngoba uma siyilungisa ngokuphelele sizoyenza ibukeke kahle kakhulu. Ukusikwa kwe-bob sekuvuselelwe futhi kugqokwe kufushane kakhulu futhi kuyalingana. Ukungeza amagagasi kulezi zinwele kungumqondo omuhle njengoba kuzinika ukunyakaza okuningi nesitayela.
Ukunakekelwa kwezinwele okuhle
Ukunakekela nokubhala izinwele ezinhle kufanele sinake ezinye izinto. Esinye sazo ukuthi kungcono kama izinwele futhi uzilolonge ngebhulashi eliyindilinga bese uzomisar, kepha futhi nedivayisi yokwenza amagagasi ngendlela elula. Gwema izinsimbi eziyizicaba eziqondisa izinwele zakho ngokuphelele, ngoba kuzovela sengathi zinevolumu encane. Le nwele nayo kufanele inakekelwe ngoba yephuka kalula, ngakho-ke kufanele ibhulashiwe ngokucophelela nangamabhulashi emvelo amahle. Uma siyigqoka mfushane, iba ncane, kepha uma inde, kufanele sizame ukuyikhulula kusuka emaphethelweni ukuze singayiphuli.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Izitayela zezinwele zezinwele ezinhle
Ezinye izindlela zokwenza izoso zemifino